Ako avy amin’ny tontolon’ny blaogy Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Ako avy amin'ny tontolon'ny blaogy Toniziana
Voadika ny 18 Novambra 2018 11:13 GMT
Nanomboka tao Tonizia tamin'ny Alarobia 5 Oktobra teo ny volana masin'ny Ramadany. Karakaraina ankehitriny ny fihaonana Ramadany an'ireo blaogera Toniziana.
Mamoaka ny fandaharana amin'ilay fetibe Medina ao Tunis izay manomboka ny 7 ka hatramin'ny 29 Oktobra i Nostradamus (amin'ny teny Frantsay). Atao isantaona mandritra ny volana masina Ramadan fanon'ny Miozolomana ao an-drenivohitr'i Tunis ity fetibe ity.
Manoratra momba ny dindon'ny Italiana eo amin'ny teny Arabo Toniziana i Imed ary manome ohatra-nà teny maro izay avy amin'ny teny Italiana.
Karim takes us on a tour of the Sidi Al Bahry market in Tunis, and talks about the newly opened Mdjez Al Bab – Beja – Kef Highway.
Mitondra antsika any amin'ny tsenan'i Sidi Al Bahry ao Tunis i Karim, ary miresaka mikasika ilay lalambe migodàna Mdjez Al Bab – Beja – Kef vao nisokatra.
Resahan’ i Marwen ny mikasika ny lahatsoratra iray novakiany tao amin'ny tranonkala teny anglisy an'ilay gazety Israeliana Yedioth Ahronoth mikasika ny fifandraisana misy eo amin'i Tiorkia sy Tonizia amin'i Israely. Mihevitra izy fa tokony handefa hafatra mazava ho an'i Israely avokoa ireo firenena Arabo sy Miozolomana rehetra fa tsy tokony hisy ny fifanarahana raha toa ka tsy mahazo ny zony rehetra ao anatin'ny vahaolana fandriampahalemana maharitra ireo Palestiniana.
Ao anatin'ny fanamarihana iray hafa nosoratany mikasika ny heviny sy eritreriny momba izay fomba hanaparitahana ny aterineto Wi-Fi ao Tonizia.
Soratan'i Zizou (amin'ny teny Frantsay) mikasika ny Ramadan-ny voalohany tao Libanona avy ao Djerba ary ny mahasamihafa izany amin'ny ao Tonizia. Manohy amin'ny filazana ny hatsarampanahy sy fahaizana mandray vahiny ananan'ireo vahoaka Libaney fantany izy.
Gaga i Houssein fa mbola mitady ny volantsinana manamarika ny fiandohan'ny Ramadany amin'ny alalan'ny masony (amin'ny teny Frantsay) foana ireo Miozolomanina hatramin'izao, izay nanome lanja lehibe ny siansa sy ny astronomia .
Manoratra (amin'ny teny Frantsay) mikasika ny lalao fifanintsanana ho amin'ny fiadiana ny ho Tompondakan'ny Baolina Kitra Tonizia-Maraoka izay ho atao amin'ny Sabotsy 8 Oktobra ao Tonizia i Adib. Manontany tena izy hoe iza no handresy, na dia manantena manokana aza izy fa ho lalaon'i Tonizia izany.